China ahaziri Plastic TPE Pump Fitting na Injection Molding emepụta na soplaya |DTG
Plastic TPE Pump ahaziri ya na ịkpụzi injection
Anyị na-anabata naanị ebu ọhụrụ ahaziri ahazi iji mepụtapụta oke, anyị anaghị ere ngwaahịa ntụpọ.Buga anyị sample iji wuo ụdị 3D dịkwa.
N'elu bụ ozi bụ isi.N'ime akụkụ a na-akpụzi injection plastic, ka anyị webata isi ihe dị ịtụnanya anyị hụrụ mgbe anyị na-eme ya.Ihe mbụ, ọkpụrụkpụ ya bụ 25mm, n'ezie nnukwu ihe ịma aka maka akụkụ injection plastik, ị kwenyere?N'ihi na nnukwu ọkpụrụkpụ, mgbe injection ịkpụzi, ngwaahịa enweghị ike mma na a obere oge n'ihi na elu ga-ada ada siri ike.Ya mere, e kwesịrị inwe a elu arịrịọ banyere ebu jụrụ usoro na anyị nwere mma plastic injection ebu ọganihu.E wezụga nke ahụ, anyị chọkwara ịhọrọ igwe injection tonnage ziri ezi.Nke abụọ, anyị na-eme ka oge ịgba ntụtụ na-adị ogologo karịa akụkụ ọ bụla anyị mere na mbụ, usoro ịgba ọgwụ bụ 220 sekọnd, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji anọ, ọ dịghị mgbe anyị chere na anyị nwere ike ime nke ahụ tupu anyị emee ha.Ọfọn, anyị nwere ike na-ekwu na anyị engineer otu nwere ahụmahụ na ike!
Aha ngwaahịa:TPU mgbapụta dabara adaba
Agba ngwaahịa:Acha anụnụ anụnụ / uhie
Isi ike ngwaahịa:80/90A
Arịrịọ elu:SPIF B2
Ndụ ebu:300 puku gbaa
Oge ebu:220 sekọnd
Gịnị bụ mkpa nke mgbidi ọkpụrụkpụ na ngwaahịa imewe?
Mgbe imewe a plastic injection ịkpụzi akụkụ, anyị ga-ekwu na ọkpụrụkpụ bụ ihe dị ezigbo mkpa nke kwesịrị ịṅa ntị ọzọ, ọ ga-mmetụta imewe nwere ike na-emezu ma ọ bụ.
Ọkpụrụkpụ mgbidi n'ụdị na-ebelata ma mbelata na nrụgide fọdụrụnụ na akụkụ ikpeazụ.Ọ bụrụ na mgbidi na-acha otu kpamkpam abụghị nhọrọ, nha nha nke nta nke nta dị mkpa iji nọgide na-enwe nkwụsi ike.
Kedu ka ị ga-esi chọpụta mgbidi mgbidi nke ngwaahịa plastik ọ bụla?
A na-ekpebi mgbidi mgbidi nke akụkụ plastik site na ihe achọrọ nke akụkụ plastik, nke gụnyere ike, ọnụ ahịa dị mma, arụmọrụ eletriki, nkwụsi ike nke akụkụ na mgbakọ chọrọ.Mgbidi mgbidi n'ozuzu nwere uru ahụmahụ ya.
Nke gara aga: CNC Machining ahaziri Ngwa ngwa Prototype nke Aluminom Housing
Osote: Ahapụrụ Black Plastic TPE Gasket Washer nwere nguzogide ire ọkụ mere site n'injection Mold
Ihe ejide oriọna ụgbọ ala ABS ahaziri nke ejiri plastik mee ...
Onye na-akwado moto nylon dị elu ahaziri nke ọma site na Plas...
ahaziri FDA Grade Injection Molding PS Tran...